स्वास्थ्य Archives -::नेपाली एकता – विश्वभरिका श्रमजीवीहरुको आफ्नै आवाज
पाँचदेखि ११ वर्षका बालबालिकालाई असार ९ देखि खोप
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले पाँच वर्षदेखि ११ वर्ष उमेर समूहका ३९ लाख बालबालिकालाई ‘फाइजर’ खोप लगाउने जानकारी गराउनुभएको छ । आज भिडियोमार्फत उहाँले बालबालिकालाई खोप प्रदानका गर्नका लागि विद्यालयमा खोप केन्द्र...
तपाईलाई बाथ रोग छ ? छुँदै नछुनुस् यी ५ चिज
काठमाडौँ । सामान्यतः बाथको समस्या बढी महिलालाई देखिन्छ भने पुरुष पनि यसका शिकार हुन्छन् । बाथ हुँदा जोर्नी दुख्छ र सुन्निन्छ । यसका लागि उपचार र पेनकिलर्स दिइन्छ । तर अनुसन्धानहरुबाट के देखिएको छ...
१५ देशमा फैलियो मङ्कीपक्स संक्रमण
पछिल्लो समयमा केही देशमा देखिएको मङ्कीपक्स संक्रमण थप देशहरुमा पनि देखिएको छ । अस्ट्रेलिया, इजरायल र स्वीटजरल्यान्डमा मंकीपक्स देखिएको हो । योसँगै मङ्कीपक्स संक्रमण फैलिने देशको संख्या १५ पुगेको छ । देशबाहिरबाट आएका एक एक जनामा...
काठमाडौं । स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा तीन वर्ष जेल वा रु तीन लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले मंगलबार संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभएको...
जुनसुकै उमेरका महिलालाई हुनसक्छ स्तन क्यान्सर
स्तन क्यान्सर स्तनको कोषिकाहरूमा हुने क्यान्सर हो । यस प्रकारको क्यान्सर अहिले नेपालमा पनि तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । स्तन क्यान्सर महिलाहरूमा सबैभन्दा धेरै देखिने क्यान्सर रोग हो । नेपालमा पछिल्लो केही वर्षयता स्तन क्यान्सर...
साना-साना कुरामा रिस उठ्छ ? यस्ता छन् नियन्त्रण गर्ने उपाय
आजभोलि मान्छेको दैनिकी निकै व्यस्त बन्दै गइरहेको छ । व्यस्त जीवनशैलीबीच तनावको मात्रा समेत बढ्दै गइरहेको छ । कामका कारण अहिले मान्छे तनावमा हुने गर्छन् । तनावमा भएको बेला झर्किने, स-साना कुरामा रिसाउने र चिड्चिडचपना...
चुनावको दिन पानी पर्न सक्ने मौसमविद्को अनुमान
काठमाण्डाै । माैसमविद्हरूले पालिका चुनावकाे दिन वैशाख ३० गते देशभर पानी पर्ने प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक पूर्वतयारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएका छन् । बङ्गलाकाे खाडीमा वैशाख २३ गतेदेखि उत्पन्न न्यून चापीय अवस्था आज आइतवार...
दही र मह मिसाएर खानुको फाइदा
दही र मह एकसाथ सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । दही र मह स्वस्थ शरीरको लागि उत्तम संयोजन मानिन्छ। दहीमा मह मिसाएर शरीरमा प्रोबायोटिकको काम गर्छ । यदि कसैले दहीमा मह मिसाएर खान्छ...
अबदेखि ३ महिना पूरा गरेकालाई बुस्टर खोप अबदेखि ३ महिना पूरा गरेकालाई बुस्टर खोप
काठमाडौ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तीन महिना पूरा भएपछि पुनःबुस्टर खोप लगाउने भएको छ। यसअघि पूर्ण मात्रा खोप लगाएको ६ महिना पूरा भएकालाई मात्र बुस्टर खोप लगाउने मिल्ने भएता पनि...
वापी पूर्वमा रक्त दान शिबिर सम्पन्न
वापी पूर्व, १३ मार्च । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज पश्चिम भारत क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत वापी नगर समिति पुर्बको आयोजनामा रक्त दान शिबिर सम्पन्न पारिएको छ । पश्चिम भारत ब्यबसायीक बिभाग सदस्य राम...